Maalin: Janaayo 17, 2020
Kaddib warbixintii EIA ee loo diyaariyay Kanal Istanbul, madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu xareeyay rafcaan "Isbedelka Deegaanka Yurub 1 / 100.000 Isbedelka Qorshaha Deegaanka". Imamoglu, kahor rafcaanka [More ...]
Iyada oo wax laga beddelay qaraarkii Madaxweynaha ee lagu daabacay Jariidada rasmiga ah ee ku taariikhaysan Janaayo 17, 2020, isbeddel weyn ayaa ka dhacay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha. Gudaha wasaaradda iyo waaxaha loojistikada, wadada, wadada tareenka iyo gadiidka isku dhafka ah [More ...]
Tunel taariikhi ah, oo qaada rakaabka inta udhaxeysa Karaköy iyo Beyoğlu, ayaa joojin doona duulimaadyadooda Janaayo 19 sababta oo ah dayactirka iyo howlaha dayactirka si ay u siiyaan adeegyo fiican dadka reer Istanbul. Markay qadka taariikhi ah ee taarikhdu xidhan tahay [More ...]
Konya degmada Metropolitan uu marka hore u saxiixay Wasaaradda Magaaleynta iyo Deegaanka Baaskiilka Plan Master ee Turkey, xaflad lagu qabtay xarunta UNESCO ee Paris waxaa la gudoonsiiyey Nobel Caalamiga ah İdealkent. Magaalooyinka iyo magaalooyinka [More ...]
Tallaabo kale oo muhiim ah ayaa la qaaday iyada oo la fulinayo ballan-qaadkii ahaa "gaadiid bilaash ah oo hooyooyinka leh carruurta u dhaxaysa 0-4 sano jir", mid ka mid ah ballan-qaadyadii doorashada ee madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu. Waxaa lagaga dooday kalfadhiga Golaha IMM shalay [More ...]
Karfest, oo martigelin doonta howlo madadaalo ah iyo bandhigyo ka socda Kartepe, cinwaanka dalxiiska jiilaalka, ayaa lagu qaban doonaa Sisli Valley Sabtida, Janaayo 18-keeda inta u dhexeysa 14.00-24.00. Bandhigyo aan la ilaawi karin oo dj ah, bandhigyo iftiin leh oo laser ah, muusig nool, [More ...]
TransportationPark, oo bixisa adeegyo gaadiid oo hoos yimaada isuduwidda Waaxda Gaadiidka Magaalada iyo Waaxda Maareynta Gaadiidka, ayaa la cusbooneysiiyay inta u dhexeysa 18 Janaayo iyo 2 Febraayo inta lagu guda jiro duullimaadyada iyo waqtiyada wadarta 17 khad sababihii fasaxa semesterka. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa nadaafadeeda iyo kahortaga jeermiska ka shaqeysa muwaadiniinta adeegsada gaadiidka dadweynaha ee caasimadda si ay ugu safraan jawi aad u nadiifsan. Basaska kujira Agaasinka Guud ee EGO waa la nadiifiyaa gudaha iyo dibadaba waana la buufiyay. [More ...]